MIKAROSY Pilatus PC-7SAF v.2 Swiss Airforce FSX - Rikoooo
Pilatus PC-7SAF v.2 Air Force FSX
Downloads 14 832
Version ny Soisa Airforce Pilatus PC-7 reworked sidina modely sy mifanaraka izany dikan.
Ity dia sary mahafinaritra an-tsary HD kalitao ary teratany mahafinaritra FSX barotra virtoaly
Ny Soisa Air Force (Schweizer Luftwaffe) dia iray amin'ireo sampany roa ny tafika mitam-piadiana miaraka amin'ny Swiss Army Soisa.
Ny Pilatus PC-7 fiaramanidina dia fiofanana ara-miaramila natao tao amin'ny 1970s amin'ny Pilatus Aircraft.
Natao tany Soisa ny Pilatus Aircraft PC-7 Turbo-Mpanazatra no nampidirana eny an-tsena ao 1978 ho birddog fampiofanana ho an'ny mpanamory nampiofana miaramila, indrindra fa tany an-tsaha ny acrobatics sy ny fiaramanidina fitaovana.
Ny PC-7 miasa amin'izao fotoana izao ao amin'ny firenena roa-polo. Nandritra ny 80 ny, ady nisian'ny tany Soisa momba ny mety fanasokajiana ny fiaramanidina ho toy ny "ady ara-nofo", izay mety ho nisakana ny fanondranana ny firenena amin'ny ady, na heverina ho toy izany. Mpanohana ny famerana ny fanondranana dahatra fa tsy misy fitaovam-piadiana na dia voavonjy, mety mora hovaina ny mividy firenena ny sambo basy in pods (naoty Herstal no voalaza ho toy ny mpamatsy) na ny baomba. Mety ho nanao anisan'izany Iraka, Iran, Burma, Meksika sy Goatemalà.